Tragbọ oloko abuo gbakoro na Bangladesh: 15 nwuru anwu, 58 meruru | RayHaber
HomeỤWAAsia880 BangladeshTragbọ oloko abuo gbakọtara na Bangladesh: 15 nwụrụ anwụ, 58 merụrụ ahụ
13 / 11 / 2019 880 Bangladesh, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, VIDEO
Tragbọ oloko abuo gbakọtara na Bangladesh: 15 nwụrụ anwụ, 58 merụrụ ahụ; 03.00 gbara na oge mpaghara ụnyaahụ gara aga na Bangladesh, ụgbọ oloko njem na-apụ na Chittagong na Brahmanbaria, n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Dhaka, merụrụ n'ụgbọ okporo ígwè ọzọ na-abịa site n'akụkụ nke ọzọ, e gburu ndị 15 na ndị 58 merụrụ ahụ.
N'ịga site na Sylhet gaa Chittagong, ụgbọ ahụ gafere ọdụ ụgbọ oloko n'obodo Kosba ruo Mondovag ọdụ. Traingbọ njem nke ọzọ si Chittagong ruo Dhaka nọ n'ụzọ nke Mondovag ọdụ. A gwara ụgbọ okporo ígwè ahụ ka o jiri gafee ụgbọ okporo ígwè nke ọzọ gafee ebe ahụ. Agbanyeghị, ụgbọ oloko si Chittagong agbasoghị ntuziaka ahụ. Minit ole na ole ka nke ahụ mechara, ụgbọ oloko si Chittagong dakwasịrị ụgbọ oloko si Sylhet.
Mgbe ihe mberede ahụ mechara, ndị 15 nwụrụ na opekata mpe ndị 58 merụrụ ahụ. A kpọgara ndị njem merụrụ ahụ na Hospitallọ Ọgwụ Kosba, ndị ikwu nke mmerụ ahụ anya mmiri na mpaghara ahụ na-eche ndị ozi ọma na nkeji. Ragbọ okporo ígwè Bangladesh kwuru na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ nwere ike ịba ụba.
Onye isi ndị uwe ojii mpaghara Anisur Rahman kọrọ nyocha banyere ihe mberede ahụ.
Ụgbọ okporo ígwè 2 gbara na Alexandria! 36 nwụrụ, 123 merụrụ ahụ!
5 nwụrụ anwụ, 10 merụrụ ahụ, jikọtara ụgbọala na-ebu ibu na Mexico
Ngwurugwu Abụọ 1 Nwụrụ Anwụ Na Barcelona
Ụgbọ mmiri abụọ dị na Pakistan, 11 Dead 70 Wounded
Ndị njem abụọ na-azụ ụgbọ elu na Autriche 1 Dead, 22
15 Nwunye Nwunye 40 Na-akpagbu Ahụ n'Ijipt
Lgbọ oloko na njem ụgbọ elu na 2 anwụọla…
1 Nwụrụ Anwụ 8 Ọkụ Na-ahụ Maka Ọkụ Na-arụ Ọrụ na Brazil
Ụgbọ okporo ígwè abụọ jikọtara na Switzerland! 30 merụrụ ahụ
Ụgbọ mmiri abụọ rutere n'Austria, 4 merụrụ 20 merụrụ ahụ nke ukwuu
Ejiri Abụọ Na-agafe N'ihe Na-akpata 23
Insgbọ oloko abuo gbakọtara na Italy: 50 merụrụ ahụ
Arsgbọala ndị ụgbọ oloko na-agafe na ọkwa ya na Tarsus
Bus jikọtara ụgbọ okporo ígwè na Russia! 19 Nwụrụ
Ọrụ ndị nchịkwa nke ndị Ijipt na-arụ ọrụ 9 Dead
Kabataş Bağcılar Tram Route na Ogologo Oge
RayHaber Ozi Ntanye 13.11.2019